Nagarik Shukrabar - ‘मैले ब्वाइफ्रेन्डलाई धोका दिएँ’
शुक्रबार, ०९ साउन २०७७, ०१ : ५६ | शुक्रवार
घर चितवन भए पनि म काठमाडौँमा हुर्केको मान्छे। पढाइमा एभरेज नै छु। स्कुलको बेला एउटा केटा धेरै मन पथ्र्यो र म अहिले ऊसँग रिलेसनमा पनि छु। मलाई ऊ एकदमै राम्रो लाग्छ। म मेरो जीवन ऊसँगै बिताउन चाहन्छु तर मेरो बानी–व्यवहार एकदम खत्तम छ। ऊ अहिले अमेरिकामा पढ्दैछ। ऊ पढ्नमा पनि राम्रो छ। उसको परिवार पनि एकदम बुझ्ने किसिमको नै पाएँ। उसको परिवार देख्दा मलाई धन पनि भएको र मन पनि भएको भन्न मन लाग्छ। त्यस्तो केटा मैले अरु पाउँदिन भन्ने मलाई थाहा छ। हामीबीच ‘सबै’ कुरा भैसक्यो। ऊ विदेश गएपछि मैले यता बिटिटिएम पढेँ। म पढ्ने कलेजमा अरु फ्याकल्टी पनि छ। अर्को फ्याकल्टीको एउटा केटासँग मैले फ्लर्ट पनि गरेँ। ऊसँग सम्बन्ध अगाडि पनि बढ्यो तर मलाई मेरो प्रेमी छ भनेर एकचोटी पनि याद आएन। हामी फिजिकल नि भयौँ। त्यसपछि पो म झसङ्ग भएँ। मलाई रिग्रेट लागेर आयो। त्यहाँदेखि मैले ऊसित दुरी बनाएँ।
मेरो केटी भन्दा बढी त केटा साथी नै छन्। अरुसँग बोलचाल मात्र हुन्थ्यो। भेट हुँदा पनि जिस्किने गर्थें तर फिजिकल्ली चैँ कहिले भएन। यो लकडाउनमा फेरि एक जनासँग सम्बन्धमा छु। म मेरो बानी देखेर आफैँ हैरान भैसकेँ। मलाई के भैराखेको छ ? मलाई नै थाहा छैन। मलाई सबैले माया गर्दिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अनि सबैसँग राम्ररी बोल्दा के–के गर्न पुग्छु याद पनि हुन्न। पहिलाको कुरा सम्झेर अहिले म कोहीसँग बोल्दिनँ, बोल्न पनि मन लाग्दैन। आफूले आफैँलाई कन्ट्रोल गरेकी छु तर पनि मलाई डर लाग्छ, फेरि म अरुसँग सम्बन्ध त गाँस्दिनँ ?
यहाँ यति धेरै घटना घटिसके कि यो कुरा मेरो पहिलो ब्वाइफ्रेन्डलाई केही पनि थाहा छैन। मलाई भन्ने हिम्मत पनि छैन किनकि म आफूले आफूलाई नै कसरी नराम्रो देखाऊँ ?
ममा यति धेरै नेगेटिभिटी जमिसक्यो कि अमेरिकाको ब्वाइफ्रेन्डसँगको सम्बन्ध पनि बढाउन सकिरहेकी छैन। म उसलाई धेरै
माया गर्छु तर ऊसँग सम्बन्धलाई निरन्तरता दिन पनि सकिरहेकी छैन।